true conditions /zu-ZA/tools-for-life/conditions/steps/survival-and-ethics.html read 15 21 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/conditions_zu_ZA.jpg Ukuziphatha neZimo
15.‎1 FUNDA LENDATSHANA
Kukhona nezimo ezikhona ngezansi Kwezingekho. Eyokuqala yalokhu Yisimo Sesikweletu.
Umuntu Usesimweni Sesikweletu lapho enza umonakalo ngokungakhathali noma ngenhloso kwabanye abantu, amaphrojekthi, amaqembu noma imisebenzi ethile. Lezi zenzo zihamba ngqo ziphikisana nezinhloso nezenzo zensalela yeqembu noma inhloso yephrojekthi noma umsebenzi.
Kuyisikweletu ukuba umuntu onjalo angabhekwa njengoba umuntu engenza noma aqhubeke nokwenza izinto ukumisa ukuqhubekela phambili kweqembu lakhe (njengomndeni wakhe noma abantu asebenza nabo). Lo muntu akanakwethenjwa. Noma yimiphi imizamo yokumlungisa ngakho ugcina imithetho noma izivumelwano ayisebenzi. Umuntu uqhubeka ngokungcolisa.
Isibonelo, lapho bonke abanye abasebenzi basehhovisi befuna ukuthi kungani iposi lilahleka, umuntu Usesimweni Sesikweletu uqhubeka ngokulahla iposi ngasese.
IFomula Yesikweletu yile:
Nquma ukuthi bangobani abangane bakho.
Nikeza ukushaya okusebenzayo (isenzo esinamandla) ezitheni zeqembu (iqembu elikhona lapha abangani bakho kwi sinyathelo 1 ngenhla) ubulokhu uzenza ingxenye yalabo, yize kunengozi yomuntu siqu ngokwenza lokhu.
Yenza ukulungisa umonakalo owenze eqenjini ngokunikela komuntu siqu okukhulu kakhulu kunalokho okuvame ukubuzwa noma okulindelwe kwilungu leqembu. (Umnikelo kuyinto umuntu ayenzayo noma ayinikezayo njengengxenye yomzamo weqembu ukuze kuzuzwe inhloso ethile.)